ဗိုလ်ထက်မင်း – ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနဲ့ အမှတ်မထင် ဆုံခဲ့ရ၊ ကြားခဲ့ရစဉ်က – အပိုင်း ၄ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအကြောင်း အမှတ်မထင် ကြားခဲ့ရ ၂၄။ မင်္ဂလာဒုံ ဗဟိုနိုင်ငံရေးတက္ကသိုလ်နည်းပြ အညာသားလေး လူပျိုသိုးကြီး ဗိုလ်ကြီးသန်းရွှေဟာ စစ်ဗိုလ်ထုံးစံအတိုင်း တပ်တွေမှာ ကြာလာရင် စား မကောင်းတာမို့ စားအိမ်သောက်အိမ်ရှာ မြို့ထဲ ခြေစင်္ကြာဖွင့် အုပ်ချုပ်မှု တည်ဆောက်တတ်တာမို့ တသားသွေးတသွေးလှ ပအို့မလေး မကြိုင်ကြိုင်ဆီ ခြေဦးလှည့်ပါတယ်။ မကြိုင်ကြိုင်ဟာ ကလေးမွေးထားပေမဲ့ အပျိုရှုံးအောင် လှပဆဲဖြစ်ကာ ရန်ကင်းမှာ စက်ချုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ် ။ စက်ချုပ်တော်တာမို့ မကြိုင်ကြိုင်ဟာ ဗိုလ်ကြီးသန်းရွှေအား လူပါ ချုပ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ ရန်ကင်းမှာ မိမိအိမ်ကို လာလည်တဲ့မိတ်ဆွေက ပြောပါတယ်။ သူတို့အိမ်ထောင်ပြုပြီးနောက်...
မောင်ကြူးရင့် – မောင်ကြီးရွာပြန် (မိုးမခ) မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ရန်ကုန်တခေါက် အလည်ရောက်ခဲ့တယ် ဝါရွှေနု ကံ့ကော်ပွင့်ကလေးတွေကတော့ အရင်အတိုင်းမွှေးမြနေတုန်းပါပဲ အမေမရှိတော့အိမ်ဟာ ကန္တာရထဲကသစ်ခြောက်ပင်လို အထီးကျန်ဆန်လွန်းပါရဲ့ တော်လှန်ရေးရဲဘော် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း အများစုကတော့ သဲပူပေါ်ပစ်တင်ခံရတဲ့ငါးလို အလေ့ကျပွင့်တဲ့ပန်းလို လေတချက်ဝှေ့တာနဲ့ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေနေတုန်းပါပဲ ကောင်းကင်တခုလုံး ကြယ်ပွင့်တွေဖုံးနေသလို ထားစရာမရှိအောင်ချမ်းသာသူနဲ့ သဲကန္တာရမှာ ရေတစက်ရှာမတွေ့သလို ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင် ငတ်ပြတ်ဆင်းရဲသူတွေကြားက အလယ်အလတ်အလွှာဟာ ခုထိပျောက်ဆုံးနေတုန်းပဲ ရန်ကုန်မြို့လမ်းလယ်ခေါင် ကားတွေကြားထဲ ကျောင်းနေရွယ်ကလေးငယ်တွေ ရေသန့်ဗူး ပန်းကုံးကိုင် ထမင်းတနပ်စာခက်ခက်ခဲခဲ ငွေရှာရတုန်းပါပဲ ဆိပ်ကမ်းသာဟာလည်း သိပ်လွမ်းစရာပါပဲ ဆိုက်တဲ့ကဗျာလှေဆိုက် မဆိုက်တဲ့ကဗျာလှေမဆိုက် ပူအိုက်နေတုန်းပါပဲ ကျေးလက်ဟာ သွေးပျက်နေပြီလား အပွေးတက်နေပြီလား ငါသွားလို့ရောက်တဲ့အခါ ကျောက်စက်ရေလို ရင်အေးရမှာလား နေထန်းတဖျားလို ရင်ပူရမှာလား စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေထက် စစ်ပွဲနှစ်ဖက်ကြား ပိတ်မိသူတွေအရေးက...
မောင်အောင်မွန် ● ကြုံဖူး ဆုံဖူး ကြိုက်ဖူးသူများ (မိုးမခ) မတ်လ ၃၁၊ ၂၀၁၈ (၁) ကျွန်တော်ငယ်စဉ်က တာရာမဂ္ဂဇင်းထဲတွင် ဒဂုန်တာရာရေးသော အောင်ဆန်း သို့မဟုတ် အရိုင်းကိုဖတ်ရ၏။ ထူးဆန်းသလို စိတ်ထဲခံစားရသည်။ မဖတ်ဖူးသော စာမျိုးကိုး။ လူကိုလေ့လာခြင်း ဟုဆရာတရာကဆိုသည်။ နောက်(၁၀)နှစ်ခန့်အကြာ ၁၉၅၅ ခု၊ နှစ်တွင် ဒဂုန်တာရာ၏ ရုပ်ပုံလွှာ စာအုပ်ထွက်လာသည်။ စာအုပ်၌ ပါဝင်သော ပန်းချီဦးအုန်လွင်၏ လက်ရာမျက်နှာဖုံး၊ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးက ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပေးသည်။ သူခြယ်မှုန်းထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ခေတ်ကာလကို ကျွန်တော်ကောင်းစွာ နားလည်ခံစားတတ်လာပြီ။ (၂) ကျွန်တော်သည် လူတစ်ယောက်အား ခွဲ၍ပိုင်း၍ ကြည့်မြင်ခြင်းကိုနှစ်သက်၏။ ကျွန်တော်ရေးသော ၀တ္ထုများမှ ဇာတ်ကောင်များ၏ စိတ်ထားအတွင်း ၀ိရောဓိကို ရေးသားနိုင်ခြင်းမှာ သူငယ်ချင်းကိုကျော်စိန် (ကွယ်လွန်သူ စိတ်ပညာပါမောက္ခ)...
ကာတွန်း သြဇာသီးရဲ့ သေချာလုပ်ပါ အမတ်မင်းရဲ့ (မိုးမခ) မတ်လ ၃၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း သြဇာသီး
အေးငြိမ်း – မြန်မာအိမ်အကူလုပ်သားများအတွက် သင်တန်း (မိုးမခ) မတ် ၃၀၊ ၂၀၁၈ (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်က ယူပါတယ်) လာမည့် ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့မှစကာ ကျွန်တော် “မြန်မာအိမ်အကူလုပ်သားများအတွက် သင်တန်း” ကို NTUC Learning Hub ၌ မြန်မာလို သင်ကြားပို့ချရပါမည်။စင်ကာပူသို့ ယခုမှ စတင်ရောက်လာသည့် အိမ်အကူလုပ်သား (FDW – Foreign Domestic Worker) များသည် ဤသင်တန်းသို့ မဖြစ်မနေတက်ရသည်။ ဤသင်တန်းမှ FDW တစ်ဦး သိသင့်သိထိုက်သည်များအားလုံးကို ရှင်းလင်းသင်ကြားပေးသည်။ သည်သင်တန်းပါ အချက်အလက်များကို ကိုးကား၍ မြန်မာအိမ်အကူများသိသင့်သိထိုက်သည်များကို ရေးလိုက်ပါသည်။ ယခင်ကလည်း သည်အကြောင်း ကျွန်တော် ရေးဖူးပါသည်။ သို့သော် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည်များရှိသဖြင့် ယခုထပ်မံ၍ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးသားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း...
မောင်ဥက္ကလာ ● ခီလေသမျှ ဟိုဟာကွဲရ (မိုးမခ) မတ်လ ၃၀၊ ၂၀၁၈ ဒီရက်အတွင်း ရွှေပြည်ဖွဘုတ် နံရံပေါ်မှာ ရွှေပြည်သားတွေ တခီခီ ဖြစ်နေတာနဲ့ မေတ္တာတရားလွှမ်းခြုံ၊ အလွန်အေးချမ်းသာ ယာတဲ့ ရွှေပြည်ကြီးမှာ ဘာတွေဖြစ်ပြန်ပြီလဲလို့ အလန့်ထညက် ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်သည်အခါ … ရွှေပြည်ရဲ့  အားလုံးအထက်မှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင် မင်းပြောင်းမင်းလွှဲ မအားမလပ်ကြားမှ ရွှေပြည်သမိုင်းအတွက် အထူး အရေးကြီးတဲ့ နေ့ကြီးနေ့မြတ်တရက်ဖြစ်တဲ့ ရွှေပြည်ရုပ်သေ ထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကြီးကို အချိန်ပေး တက်ရောက် ပြီး၊ ရွှေပြည်သမိုင်း အပြောင်းအလဲကို ရှေ့တန်းမှ ရဲရဲဝံ့ဝံ့၊ မားမားမတ်မတ် စပွန်ဆာယူပြီး ရပ်တည်နေကြတဲ့ ရုပ်သေလောက သားတွေကို ကျေးဇူးတင်စကား တက်ရောက်ပြောကြတာကို တွေ့မြင်ပြီး ရုပ်သေလောကသားတွေနဲ့ထပ်တူ ဝမ်းမြောက်မဆုံး ခင်မှာ… အားလုံးအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ...
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ● အားလပ်ရက် (မိုးမခ) မတ်လ ၃၀၊ ၂၀၁၈ ဒီနေ့ဆိုင်မှာ မျက်ခုံးညှပ်ဖို့တွေးထားတယ် ပါးပါးကလေးနဲ့ တဂျီဂျီအော်နေမယ် အရိုးကလေးတွေ ကော်ပတ်တိုက်ရမယ် ပြီးတော့ မျက်လုံးကိုလည်း ထုတ်ဆေးရမယ် ပြီးတော့ ရေကူးကန်လည်း နေလှမ်းရမယ် ပြတင်းပေါက်ကနေကြည့်မယ်ဆို လူနံ့တွေနဲ့ဘယ်လို နေရမလဲ မြေခွေးတွေဟာ ကြောက်တတ်ကြပါတယ် ကိုယ်က မြေခွေးတကောင်မှ မဟုတ်ဘဲ ဟုတ်တော့ကော အဲဒီကို သွားဖို့လိုမှာလား ကိုယ် စမ်းသပ်မိတယ် အဲဒါနဲ့ပဲ မသွားဖြစ်ခဲ့တာ ကြောင်အိမ်ထဲက ဓားတုံးသလောက်ပဲ ဒီနေ့တော့ ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ် ပျင်းလို့ရယ်ဒီမိတ်တွေ ဆောင်ထားခဲ့တယ် သွားစွယ်တွေကိုတော့ ဝှက်ထားလို့မရဘူးမဟုတ်လား ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ထွက်မှရမယ် မိုးကလေးရွာနိုင်တယ် ဒီချိန်ဆို အားနေလောက်တယ် အိမ်တံခါး သော့ခတ်ခဲ့တယ် ပြီးတော့လည်း အတွင်းထဲကနေ ပြန်လှည့်ရတယ် ကိုယ်ဟာ ဒီလိုမျိုးလျှောက်သွားနေလို့မှမရဘဲ...
ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ တရားစောင့်နတ် (မိုးမခ) မတ်လ ၃၀၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ဆွေသား
ဗိုလ်ထက်မင်း – ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနဲ့ အမှတ်မထင် ဆုံခဲ့ရ၊ ကြားခဲ့ရစဉ်က – အပိုင်း ၃ (မိုးမခ) မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၈ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်နဲ့အမှတ်မထင်ဆုံခဲ့ရ (ဒုတိယကြိမ်) သောကတောင်တန်း နေကြယ်တွေသန်းခဲ့ရတဲ့ မိန့်ခွန်းရှည် ၂၀။ ၁၉၉၁ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ တပ်မတော်နေ့စစ်ရေးပြအခမ်းအနားမှာ စာရေးသူဟာ စစ်ရေးပြမှူးကြီးရဲ့ လုံခြုံရေးအပါအ၀င် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းအားလုံးရဲ့ ထိပ်ရှေ့ပြေးလမ်းကြောင်း ရှင်းတာဝန်အရ လက်နက်ကိုင်တပ်စိတ်တစိတ်ပါ NISSAN PATROL ထိပ်နီကားနဲ့လိုက်ပါထမ်းဆောင်ရပါတယ်။ ကားကို အနှေးမောင်းရပြီး ပန်းကုံးစွပ်ဖို့ တိုးလာတဲ့ လူထုနဲ့နောက်က စစ်ကြောင်း ပုံပျက်မပျက် ထိန်းပေးရသလို လူထုထဲက အဖျက်အမှောက်လုပ်သူများ ဘွားကနဲပေါ်လာရင် မိမိက ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ပြီး ဖေါက်ထွက်ရမည့်အူကြောင်းနဲ့ စစ်ရေးပြမှူးကြီးကို ကားပေါ်ဆွဲတင်ဖို့တကွ လမ်းတလျှောက်လုပ်နိုင်မည့် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို တိုက်စစ်ကစားသလို တွက်ချက်နေရပါတယ်။...
ဂါမဏိ ● ​တရုတ်စစ်တပ်နဲ့ တရုတ် – အမေရိကန်စစ်တပ် တွေ့ကြရာဝယ်
ဂါမဏိ ● ​တရုတ်စစ်တပ်နဲ့ တရုတ် – အမေရိကန်စစ်တပ် တွေ့ကြရာဝယ် (မိုးမခ) မတ်လ ၂၉၊ ၂၀၁၈ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံက သံချပ်ကာတပ်မဟာနှစ်ခုဟာ အတွင်းမွန်ဂိုးလီးယားပြည်နယ် ကျူးရီဟယ် လေ့ကျင့်ရေးအခြေစိုက်စခန်းမှာ တပတ်ကြာ စစ်လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ် တဖက်နဲ့တဖက် တိုက်ခဲ့ကြတယ်။ အနီ တပ်နဲ့ အပြာတပ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ တပ်မဟာနှစ်ခုစလုံးမှာ အမျိုးအစားတူ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ သံချပ်ကာ ယန္တရားတွေ တပ်ဆင်ထားတယ်။ အပြာတပ် ဆိုတာ အမေရိကန်စစ်တပ်ပုံစံနဲ့ စီစဉ်ခင်းကျင်းတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ တပ် မဟာဖြစ်တယ်။ အနီတပ်ကတော့ သမရိုးကျ တရုတ်ကွန်မြူနစ်တပ်ပုံအတိုင်း စစ်ဆင်စစ်တက် စစ်ကစား တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီစစ်ကစားလေ့ကျင့်ခန်းမှာ အနီတပ် ချေမှုန်းခံခဲ့ရပါတယ်။ “တနာရီအတွင်းမှာ ငါတို့ဟာ လေကြောင်းတိုက် ခိုက်မှုတွေ၊ ဂြိုလ်တုထောက်လှမ်းရေးတွေ၊ ဆိုင်ဘာ (ကွန်ပျူတာ)...
ဆောင်းယွန်းလ ● ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေခဲ့ရခြင်းများ (မိုးမခ) မတ်လ ၂၉၊ ၂၀၁၈ နားလည်စရာမလိုပဲ ငိုခဲ့ရတယ် ရယ်ခဲ့ရတယ် ဝမ်းနဲခြင်းမှာ တယောထိုးသံပါမလာဘူး သေဆုံးခြင်းကို နှဲမှုတ်မပြခဲ့ဘူး ကြည့်ပြီး ရူးခဲ့ရတာနဲ့ကြည့်ရင်း ရူးသွားခဲ့တာကတော့ ကွာမှာပေါ့ ငါတို့ ခေါင်းမော့ရမယ့်အချိန်ဆိုတာ ငါတို့ ခေါင်းတွေကို ပြန်ရှာတွေ့မယ့်အချိန်ပါပဲ လောလောဆယ်အထိတော့ တိမ်တွေက အိမ်ခေါင်မိုးနဲ့ ငြိနေကြတုန်းပဲ။ ဆောင်းယွန်းလ No tags for this post.
ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ စိုးရိမ်သူတွေ … (မိုးမခ) မတ်လ ၂၉၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီပုချေ
ကမ်လူဝေး ● သေနတ်သမား (မိုးမခ) မတ်လ ၂၉၊ ၂၀၁၈ သေနတ်သမားဟာ ငါတို့အထဲမှာရှိနေမှန်း မသိခဲ့ သေနတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အထိ သေနတ်သမားလို့ မထင်ခဲ့မိ သေနတ်သမားဟာ သေနတ်ကို ဝေ့ရမ်းပြတဲ့အထိ ရန်သူကိုပစ်ဖို့ ထုတ်လိုက်သလားလို့ ဝမ်းသာမိ သေနတ်သံကြားပြီး သေနတ်သမား ဘေးကလူ သွေးအိုင်ထဲ ခွေနေမှ အန္တရာယ်သေနတ်သမားဟာ ငါတို့ကြားထဲမှာ ရှိမှန်းသ်ိခဲ့ သေနတ်သမားဟာ ဘယ်အချိန်ကတည်းက ငါတို့ထဲကိုရောက်နေပါသလဲ ငါတို့တယောက်စီကို အမှည့်ခြွေ ခြွေနေတဲ့ သေနတ်သမားဟာ ဝမ်းနည်းစရာ ငါတို့ထဲကလူဖြစ်နေတယ် သေနတ်သမားဟာ သေနတ်ကို ဘယ်အချိန်ကတည်းက ပိုင်ခဲ့သလဲ ဒီသေနတ်ဟာ ဘယ်ကရောက်လာသလဲ သေနတ်ဟာ သေနတ်ကိုင်သူကို လူသတ်အောင် စွဲဆောင်နိုင်ပုံရတယ် လူသတ်ခြင်းရဲ့ ရသကိုသိသွားပုံရတဲ့ သေနတ်သမားဟာ သွေးဆာနေတယ် ပစ်ခတ်မှုတွေဟာ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဖြစ်ပေါ်နေတယ် ငါဟာ...
ဇော်ရဲ (လောကဂုဏ်ရည်) ● ကန်ဆင့်တောင်ရွာ၊ မောင်စွမ်းရည်စာကြည့်တိုက် (မိုးမခ) မတ်လ ၂၉၊ ၂ဝ၁၈ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသမှာ ပုဂံ၊ အင်းဝ၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေး၊ ရတနာပုံစသော ရှေးမြန်မာမင်းနေပြည်တော်များ ပေါ် ပေါက်ခဲ့ရာဒေသဖြစ်သည့်အလျောက် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးဓလေ့စရိုက်များနှင့် ဗုဒ်္ဓဘာသာသာသနာစည်ပင်ထွန်းကားရာဒေသဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။ အညာဒေသမှာ ပုဂံမြို့ဟောင်းတည်ရှိရာ မြင်းခြံခရိုင် အတွင်းမှာ မြင်းခြံမြို့ရဲ့အရှေ့ဘက် ၅ မိုင်လောက်အကွာ ကျွန်တော်တို့ရွာကလေးတည်ရှိပါတယ်။ မြင်းခြံက မန်္တလေးကိုသွားတဲ့ ရထားလမ်း၊ ကားလမ်းရှိသလို မြင်းခြံ မိတီ်္ထလာသာစည်ကိုသွားတဲ့ ရထားလမ်း၊ ကားလမ်းလည်း မရှိပါ။ မြစ်လမ်းချောင်းလမ်းနဲ့ လမ်းမနီးပါ။ ဂြိုဟ်တုခေတ်မှာ ထော် လာဂျီနဲ့သာ အသွားအလာရှိနေတဲ့ ရွာကလေးဖြစ်ပါတယ်။ အိမ် ခြေကတော့ ၈ဝ ခန့်သာရှိပါတယ်။ ရွာသိမ်ရွာငယ်၊ ဇင်ကလယ် လေးလို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် သမိုင်းရှိတဲ့...
ကာတွန်း ကိုခေတ် – ကြိုဆိုပါတယ် သမ္မတသစ်ကြီး
ကာတွန်း ကိုခေတ် – ကြိုဆိုပါတယ် သမ္မတသစ်ကြီး (မိုးမခ) မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ကိုခေတ်
မောင်ရစ် – ရွေးကောက်ပွဲကနေ အာဏာရှင်တွေ တက်လာကြတာပဲ (အယ်ဒီတာ့လက်ရေး) မိုးမခ၊ မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၈ ဘယ်နှယ့် ရွေးကောက်ပွဲကနေ အာဏာရှင်တွေ တက်လာကြမှာတုံး။ အာဏာသိမ်းပြီးတော့သာ အာဏာရှင်ဆိုတာ တက်လာရတာပါလို့ ပြောရမယ် ထင်တာ။ အတိတ်ကို ပြန်မသွားပါနဲ့။ လောလောလတ်လတ် ၂၀၁၃ မှာ အီဂျစ်တပ်မတော်က ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ တင်ထားတဲ့ သမ္မတကို လက်နက်နဲ့ ဖြုတ်ချခဲ့တယ်။ ၂၀၁၄ – ထိုင်းမှာလည်း တပ်မတော်က လူထုမဲနဲ့ တက်လာတဲ့ အစိုးရကို ဖြုတ်ချပြီး အာဏာကို ရယူခဲ့တယ် မဟုတ်ပါလား။ သည်တော့ ရွေးကောက်ပွဲကနေ အာဏာရှင်တွေ တက်လာတယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ ငြင်းရတော့ မလိုလို။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါက လမ်းဟောင်းနည်းပါ။ အခုပြောချင်တာက လမ်းသစ်နည်း။ ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကို...
လင်းသက်ငြိမ် ● သွေးညှီနံ့နဲ့ ပန်းပွင့်​များ (မိုးမခ) မတ်လ ၂၈၊ ၂၀၁၈ (၁) လူ့အလို စစ်က မလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ချိုနဲ့လားလို့ ခလေးတွေက​တောင်​ မေးကုန်ကြပြီ တံဆိပ်ရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ ချိုးဖြူငှက် သံလွင်ခက် ကြည့်​​ကောင်းတဲ့ဆိုင်းဘုတ်​ကြီး​တွေနဲ့ ချိုးဖြူငှက် သံလွင်ခက် လူကြိုက်နည်းတဲ့ အနုပညာဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ကဗျာ တကယ်တော့ အကုန်လုံး လေဖမ်းဒန်းစီး​နေကြတာပါပဲ။ တုံးခုန် ဇယ်ခတ်တွေနဲ့ အိမ်ထဲက ပစ္စည်းလေးတွေ ပြောင်သလင်း​ခါ ကုန်​ပေါ့ ကိုယ့်အချင်းချင်းအတွက် ထက်မြတဲ့ သွားတွေမှာ သွားရည်တမြားမြား တစ်ယောက်သွေးနဲ့ တစ်ယောက် ခြေထောက် ဆေးရတာ ညှီစော်မနံသေးဘူးလားတဲ့ ချိုင်းထောက်နဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က မေးနေတယ်။ (၂) စကားဝိုင်းရဲ့ ဇွန်းသံပန်းကန်သံများအပြီး လက်နက်ကြီး ဆယ့်လေးချက်တိတိ ပစ်လိုက်တယ် လက်ခုပ်သံတွေနဲ့ အောင်မြင်စွာ...
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● တရုတ်ပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ မြန်မာ – အပိုင်း (၄)
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● တရုတ်ပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ မြန်မာ – အပိုင်း (၄) (မိုးမခ) မတ်လ ၂၈၊ ၂ဝ၁၈ ● လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ မိတ်ဆွေတစ်ဦး ရေးတဲ့စာလေးကို သတိရနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကလဲကွာ လျှပ်စစ်တယူနစ်ကို ၃ဝ ကျပ်လောက် အစိုးရ က အရှုံးခံတယ်။ တယူနစ် ၃၅ ကျပ်နဲ့ရောင်းတော့ များများသုံးနိုင်တဲ့လူ အစိုးရဆီက ငွေများများရနေသလိုပဲ။ မီတာခ တလ ၅ဝဝဝ ပဲ ကုန်တဲ့အိမ် အစိုးရထောက်ပံ့ကြေး တလ ၅ဝဝဝ ရတယ်။ မီတာခ တစ်လ ၁ သိန်းသုံးနေတဲ့သူဌေးက အစိုးရဆီက တလ ၁ သိန်း ထောက်ပံ့ကြေးရနေတဲ့ စနစ်ကြီးအကြောင်း ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ စနစ်နဲ့လူအကြောင်း အ နည်းငယ်...
ကာတွန်း ဘီရုမာ – ကြိုဆိုပါသည် မြန်မာပြည်
ကာတွန်း ဘီရုမာ – ကြိုဆိုပါသည် မြန်မာပြည် (မိုးမခ) မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၈ No tags for this post.
လေပြည်ချမ်းချမ်း ● နွေဦး (မိုးမခ) မတ်လ ၂၈၊ ၂၀၁၈ အေးခဲနေတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကိုဖမ်းဆုပ်ပြီး ကြွေရွက်တရွက်လို ဆောင်းရာသီထဲ ဘဝကိုခြွေချထားခဲ့တာ။ အေးခဲတိတ်ဆိတ် အထီးကျန် … လေနေတဲ့စိတ်တွေ … သိပ်ဖျားခဲ့တယ်။ လဲ့လဲ့လေးဖြာတဲ့ နေခြည် နူးညံ့သွေးချိုတဲ့နွေဦး ဘာကိုမှချည်နှောင် ထားလေ့မရှိတဲ့ ပွင့်လင်းမှု နွေတူရိယာ လေညင်းပျိုရဲ့တေးချွန်သံ ။ အကန်သတ်မဲ့ တန်ဖိုးကြီးအခမဲ့တွေမှာ အအေးမိစိတ်အထုံးတွေ စိတ်ကူးအတိုင်း နေပူဆာလှုံကြည့်ရအောင် ။ ရင်ဘတ်ထိပြုံးတတ်ရင် နှစ်အထပ်ထပ် စိတ်အညှိအခိုးတွေ ရာသီအရွေ့လေထဲ လွင့်ပြေးသွားမယ်ထင်ရဲ့ကွယ်။ ငါ ဒီနေ့ အကြမ်းတမ်းဆုံး လောကဓံမှာ အနူးညံ့ဆုံး ပြုံးတတ်ပြီ ။ ။ လေပြည်ချမ်းချမ်း Tags: လေပြည်ချမ်းချမ်း
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● အယ်ဒီတာတို့၏ အသံများ (မိုးမခ) မတ်လ ၂၈၊ ၂၀၁၈ မျက်မှောက်ခေတ်တွင် အယ်ဒီတာတို့ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများမှာကား ကဗျာစာမူပို့သူများကို ပြန်လည်ဖြေရှင်း ပေးနေရသောပြဿနာများလည်း ပါဝင်လေသည်။ စာပေလောကထဲသို့ ကလောင်သစ်များအဖြစ် ဝင်ရောက်လာသော လူငယ်ကလောင်သစ်များအများစုသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်ရှေ့ပိုင်းမှ ဆရာ/မများကဲ့သို့ အခက်အခဲ သိပ်မရှိကြတော့ပါဟုပြော လျှင် လွန်အံ့မထင်ပါ။ ထိုခေတ်ထိုကာလကများဆီက အယ်ဒီတာများကို အလွန်ချစ်ကြောက် ရိုသေသမှု ရှိခဲ့ကြရ၏။ စာမူပို့ ဖို့ကိုပင် မဝံ့မရဲဖြင့်ပို့ခဲ့ကြရသလို အယ်ဒီတာကိုမျက်စိရှေ့တွင် မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့နေရပါသော်လည်း မခေါ်ဝံ့ မခေါ်ရဲ နှုတ်ဆက်ခြင်းအမှုကို အလွယ်တကူမပြုရဲခဲ့ကြသော ခေတ်ဖြစ်သည်။ ယခုခေတ်သည်ကား ထိုသို့မဟုတ်တော့ပြီ။ မဂ္ဂဇင်းဂျာနယ် နေ့စဉ်သတင်းစာတို့ကို စာတိုက်မှ စာမူပို့သောသူများလည်း အရင်ကနဲ့စာလျှင် နည်းပါးလာလေပြီ။ Email များပေါ်လာခဲ့ပြီ။ Facebook ၊...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနဲ့ အမှတ်မထင် ဆုံခဲ့ရ၊ ကြားခဲ့ရစဉ်က – အပိုင်း ၂ (မိုးမခ) မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၈ အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုနဲ့ ဆက်ဆံရေးဘ၀ ၉။ စာရေးသူဟာ နတလက ဖိတ်လိုက်တဲ့ဧည့်သည်တဖွဲ့တည်းဆိုရင် ပြသနာမရှိဘဲ လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း အဆင့်လိုက်လုပ်နိုင်ပေမဲ့ ၁၉၉၀ခုနှစ်ကာလမှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အင်းတော်ကြီး တိုင်းရင်သားအဖွဲ့နဲ့ လရွှီးလဟယ် နာဂတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ဟာ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ရောက်လာကြလို့ အစီအစဉ်တွေ ရှုပ်ထွေး ဗြောင်းဆန်နေအောင် သတိထားကိုင်တွယ်နေရပါတယ်။ အင်းတော်ကြီးအဖွဲ့က အရင်ရောက်ပြီး နာဂအဖွဲ့က နောက်ကျမှ ရောက်လာတာမို့ နာဂအဖွဲ့ကို စုပေါင်းရိပ်သာမှာ ခဏထားခဲ့ပြီး အင်းတော်ကြီးတိုင်းရင်းသားတွေကို လေ့လာရေးအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကို လှည့်လည်ပြသနေပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ စာရေးသူအား ရဲဝါယာလက်ကား၊ ဆက်သွယ်ရေးစက်ပေါ်မှာ လူကြီး အရေးပေါ်စကားပြောချင်တယ် ဆိုလို့ ပါလာတဲ့...
(၇၃)နှစ်​​မြောက်​ ဖက်​ဆစ်​​တော်​လှန်​​ရေး​နေ့ အခမ်းအနား NLD ​ဌာနချုပ်​ရုံးတွင်​ကျင်းပ (သတင်း NLD ပြန်ကြားရေး) ဓာတ်ပုံ – ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်)၊ မိုးမခ၊ မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၈ မတ်​ ၂၇ ရက်​ (၇၃)နှစ်​​မြောက်​ ဖက်​ဆစ်​​တော်​လှန်​​ရေး​နေ့အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့ချုပ်​ ဗဟိုဌာနချုပ်​ရုံး၌ မတ်​လ ၂၇ ရက်​ နံနက်​ ၁၀ နာရီကကျင်းပခဲ့သည်​။ အခမ်းအနားတွင်​ သဘာပတိဗဟိုအလုပ်​အမှု​ဆောင်​အဖွဲ့ဝင်​ ဦးဟံသာမြင့်​ ကအဖွင့်​မိန်းခွန်း​ပြောကြားပြီး ဖက်​ဆစ်​​တော်​လှန်​​ရေး​နေ့ ​ကြေညာစာတမ်းကို ဗဟိုအလုပ်​အမှု​ဆောင်​အဖွဲ့ဝင်​ ​ဒေါက်​တာမျိုးညွန့်​က ဖတ်​ကြားသည်​။ ယင်း​နောက်​ သဘာပတိ ဦးဟံသာမြင့်​က နိဂုံးချုပ်​စကား​ပြောကြားသည်​။ အခမ်းအနားသို့ အဖွဲ့ချုပ်​နာယက ဦးတင်​ဦး၊ ဗဟိုအလုပ်​အမှု​ဆောင်​အဖွဲ့ဝင်​ ဦးဥာဏ်​ဝင်း၊ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်​ကြီးချုပ်​ ဦုးဖြိုးမင်းသိန်း၊ဗဟို​က်ာမတီဝင်များ၊​​ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီးလွှတ်​​တော်​ ဥက္ကဌ၊ဒုတိယဥက္ကဌ နှင့်​လွှတ်​​တော်​ကိုယ်​စားလှယ်​များ၊ အဖွဲ့ချုပ်​အဖွဲ့ဝင်​များနှင့်​ သံတမန်​များ၊သတင်းမီဒီယာများတက်​​ရောက်​ခဲ့ကြသည်​။ No tags...
ဦးချစ်လှိုင် ( ခ. ) စာရေးဆရာကိုကိုမောင်ကြီး ၏ ဈာပန မြင်ကွင်း ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်) မိုးမခ၊ မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၈ (ရန်ကုန် မတ် ၂၇)။ ဦးချစ်လှိုင် ( ခ. ) စာရေးဆရာကိုကိုမောင်ကြီး ၏ ဈာပနသို့ နိုင်ငံရေး သမား လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် များနှင့် စာရေးဆရာများ လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ဇေယျကျော်ထင်ဘွဲ့ရ ၊ နိုင်ငံဂုဏ်ရည် ပထမဆင့်၊ မော်ကွန်းဝင် ပထမဆင့်၊ ဗဟိုနိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်း နည်းပြချုပ် ဆရာကြီးဦးချစ်လှိုင် ( စာရေးဆရာ ကိုကိုမောင်ကြီး)၏ ဈာပနကို ရေဝေးသုသာန်တွင် ယနေ့ နေ့လယ် ၃ နာရီ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဆရာကြီး၏ နိုင်ငံရေးသမားလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ၊ တပည့်များ ၊ စာရေးဆရာများ လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။...
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၆၃) (မိုးမခ) မတ်လ ၂၇၊ ၂ဝ၁၈ ● ၈၁၅ စစ်ဒေသနှင့် အခါပြောက်ကျားများ CPB အနေနှင့် နယ်စပ်အခြေခံစခန်းများဖွင့်လှစ်ရာတွင် အရှေ့မြောက်စစ်ဒေသပြီးလျင် ဒုတိယအောင်မြင်မှုရသည့်ဒေသမှာ ၈၁၅ စစ်ဒေသဖြစ်ပါသည်။ ၈၁၅ စစ်ဒေသတည်နေရာမှာ ရှမ်းပြည်၏ အရှေ့စူးစူး တရုတ်၊ မြန်မာ၊ လာအိုနယ်စပ်တွင်ဖြစ်သည်။ မဲခေါင်မြစ်ရစ်ခွေစီးဆင်းနေသည့် သုံးနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်မြေပုံတွင်ကြည့်ပါက အရှေ့ဖက်ဆုံးတွင် ထွက်နေသော အတက်ကလေးနေရာဖြစ်သည်။ ထိုဒေသတွင် အခါလူမျိုးများအခြေချနေထိုင်ကြပြီး ဖာလုံ – ဖာလျံ ဒေသ၊ မိုင်းစော့၊ မိုင်းဟဲဒေသဟု ဒေသခံများကခေါ်ဆိုကြသည်။ မုန်းစော၊ မုန်းဟဲဒေသသည် ပေ ၂ဝဝဝ ကျော်နှင့် အထက်မြင့်သော တောင်တန်းဒေသဖြစ်သည်။...
ထွန်းဝင်းငြိမ်း ● သခင်ဇင် (၁၉၁၂ – ၁၉၇၅) – အပိုင်း (၄) (မိုးမခ) မတ်လ ၂၇၊ ၂၀၁၈ ● မဒညတနဲ့အတူ ၁၉၅၉၊ မေလ ၃ဝ ရက်နေ့စွဲနဲ့ သခင်ဇင်ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု(မဒညတ) သဘာပတိအဖွဲ့(ဗဟို)အနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း ထံကို တိုက်ရိုက်ပေးစာတစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပေးစာမှာ ”တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်၍ ပြည်သူ့ဆန္ဒဖြင့် ရွေးကောက် တင်မြှောက်သော ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအစိုးရ ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီကျသော သူမနာကိုယ်မနာ ပြည်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရန် တင်ပြခြင်း ”ခေါင်းစီးနဲ့” —- လူမျိုးစုံအခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝ ရရှိရန်နှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်တို့အတွက် ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၅ ရက်တွင် အမျိုးသား...
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● တရုတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်မြန်မာ – အပိုင်း (၃) (မိုးမခ) မတ်လ ၂၇၊ ၂၀၁၈ ၁။ လက်ရှိ မြန်မာအဂတိတိုက်ဖျက်ရေး ဦးပြုံးချို ကရင်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဂတိဖမ်းဆီးခံရခြင်းနှင့် အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးဝက်ဆိုဒ် ဇူလိုင်-၂ဝ၁၇ သတင်းနဲ့ အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းကောင်း မဟာဗြူဟာများ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အရေးယူတဲ့ လာဘ်စားသူ တွေ အမြောက်အများတင်ထားတာကို ငါ့မြို့နယ်၊ ငါ့ဆွေမျိုးပါသလား လူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီ အရေးယူကုန်ပြီဆိုပြီး ကြည့်ကြ တယ်။ ၆ လအကြာ အခုတော့ စာရင်းတွေ ရှာမတွေ့တော့ပြန်ဘူး။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ခေတ်တုန်းကလည်း အစိုးရအရာ ရှိကြီးတွေ အမည်ဖော်ပြအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီအမည်တွေ ရှာမရတော့ပါဘူး။ အဂတိနဲ့ပြုတ်သွားတဲ့ ဝန်ကြီး စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ဆို ရွေးကောက်ပွဲဝင်နွဲခွင့်ရပါတယ်။ ရှုံးသွားလို့...
အီကြာအော် ● ဖွတ်ကလေး၊ ခီကြာအော်နှင့် ခက်သေးရွာမှ အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲကြီး (မိုးမခ) မတ်လ ၂၇၊ ၂၀၁၈ ခက်သေးရွာကြီးတရွာလုံး အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲကြီးကြောင့် ကလေးကအစ ခွေးကအစ ဖွဘုတ်နှင့် တီဗွီရှေ့တွင် အလုပ်များ နေကြလေသည်။ ဒီနှစ် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲကြီးကား ခက်သေးရွာအတိုင်ပင်ခံကြီးအမေပုက မိန့်ခွန်းပြောသည်ကြောင့် ခက်သေးရွာသားအများ ခါတိုင်းနှစ်ထက် ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြလေသည်။ “ဟေ့ကောင် ဖွတ်ကလေး ဒီနှစ် ဘယ်သူတွေ အကယ်ဒမီရသလည်းကွ” အီကြာအော်က သိချင်ဇောဖြင့် ခက်သေးရွာလယ်ကောင်တွင် ဖုန်းပွတ်ကာ လိုက်ဗ်ကြည့်နေသော ဖွတ်ကလေးကို မေးလိုက် လေသည်။ “ဆရာအော်က ဒီနှစ်မှာ ထူးထူးခြားခြားပါလား…၊ ခါတိုင်းနှစ်ဆို အကယ်ဒမီပွဲပြောရင် ဆရာအော်က စိတ်တောင်ဝင်စားတာ မဟုတ်ဘူး” “အေးလေကွာ…၊ ငါက အတင်းကလိထိုးတဲ့ကားတွေဆို ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး..၊ ဒီနှစ်တော့ အမေပုတက်တဲ့ပွဲမို့လို့ပေါ့ကွ” “ဆရာအော်ကလည်းဗျာ..၊ ဘယ်သူတွေက...
ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်ရဲ့ ပျောက်သောသူ ကြာရင်မေ့ (မိုးမခ) မတ်လ ၂၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်
“March for Our Lives” လှုပ်ရှားမှု ချီတက်ပွဲ လူသိန်းချီ တက်ရောက်
“March for Our Lives” လှုပ်ရှားမှု ချီတက်ပွဲ လူသိန်းချီ တက်ရောက် (နိုင်ငံတကာသာဂိ) မိုးမခ၊ မတ် ၂၇၊ ၂၀၁၈ မတ်လ ၂၄ မှာ ကျောင်းသားတွေက တပြည်လုံးက ပြည်သူတွေကို တပ်လှန့်လိုက်ပါတယ်။ လမ်းတွေပေါ်တွက်ပြီး မတ်လချီတက်ပွဲ ကျင်းပမယ် တဲ့။ အမေရိကန်ပြည်မှာ သေနတ်ပစ် အကြမ်းဖက်မှုတွေကို မတားဆီး မကာကွယ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပါတီတွေကို ကန့်ကွက် ရှုတ်ချကြဖို့၊ သေနတ်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ဒါးစာခံအဖြစ် စတေးနေရတာတွေ ရပ်ဆိုင်းဖို့၊ ဥပဒေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေကနေ သေနတ်ကိုင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကို တားဆီး နှိမ်နင်းနိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေက စိန်ခေါ်သံ ဟစ်ကြွေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄က ဖလော်ရီဒါ၊...
Page5of 889«1...34567...889»
>8th August 2008 to be marked as &quot;Burma Day&quot; world wide to acknowledge 20 years struggle for democracy in Burma under the military junta